देउवा सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने भन्दै, प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा, के हो खास रहस्य ? — Imandarmedia.com
देउवा सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने भन्दै, प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा, के हो खास रहस्य ?
काठमाडाैं। सत्तारुढ गठबन्धनका नेता प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा औँल्याएका छन् । यो सरकार माधव नेपालको अडानका कारणले टिकेको उनको विश्लेषण छ।
माओवादी केन्द्रको बैठकमा प्रचण्डले गरेको ब्रिफिङमा प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि जीवितै रहेको बताए । परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने शक्तिले यो गठबन्धनलाई भत्काएर पुरानै सरकार ल्याउन खोजिरहेको प्रचण्डले बताएका छन्।
‘माधव नेपाल दह्रो अडिदिएको हुनाले मात्रै बहुमत पुगेको छ’ प्रचण्डले बैठकमा भने, यो सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने खतराको घण्टी बजि नै राखेको छ । प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन, त्यसैले हामीले धेरै हौसिन जरुरी छैन।
सरकारको गणितबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डले अगाडि भने, जसपाले वैधानिकता पाएकाले २० सांसद छन् । काँग्रेस र हाम्रा सांसद १११ छन् । सबै जोड्दा १३१ मात्र पुग्छ, यत्ति हो। यसरी हेर्दा हामी अल्पमतमा छौँ।
सरकार गठन भएको एक महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुनुमा माओवादी पार्टीको कुनै दोष नरहेको प्रचण्डको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले नाम माग्नासाथ स्थायी कमिटीको बैठक राखेर मन्त्रीका नाम दिन सक्ने प्रचण्डको तर्क छ। प्रचण्डले भने, दलभित्रको अवस्थाका कारणले ढिलो भएको हो, हाम्रो कारणले ढिलो भएको हैन ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘कहिले जसपाको आधिकारिकता विवाद त कहिले एमालेको अन्तरसंघर्षले स्वरूप लेओस् भनियो ।अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले काँग्रेस कार्यसमितिको बैठकपछि गरौँ भन्नुभएको छ।
प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा माधव नेपालबारे खासै बोलेनन् । उनले यत्ति मात्र भने, ‘माधवजीको के हुन्छ, थाहा छैन । आशा गरौँ, ठिकै हुन्छ ।’ केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले केपी ओली प्रवृत्तिबारे लामो व्याख्या गरे पनि माधव नेपाल खासै खुलेनन् । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेससँग गरिएको गठबन्धनको विषयमा पनि उनले सम्बोधनमा खासै व्याख्या गरेनन् ।
तर, बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक र सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा भने उनले काँग्रेससँग गरिएको गठबन्धनको औचित्यबारे विश्लेषण गरेका छन् । प्रचण्डको यो प्रतिवेदनमाथि राय दिनका लागि आइतबार ११ बजे पुनः बस्ने बैठकमा समूहगत छलफल गरिने भएको छ । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म कायमै राख्ने पार्टीको नीति रहने उल्लेख छ । प्रस्तावमा भनिएको छ–
‘केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ । यसलाई नरुचाउने शक्तिहरू गठबन्धनलाई कमजोर पार्न र भत्काउन लागिपरेका छन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ।
प्रचण्डले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टी फेरि प्रमुख शक्ति बन्ने आधार तयार भएको दाबी गरेका छन् । बैठकमा समसामयिक परिस्थितिबारे ‘संक्षिप्त रिपोर्टिङ’ गर्ने क्रममा प्रचण्डले भने, ‘आगामी निर्वाचनसम्म आउँदा माओवादी देशको प्रमुख शक्ति बन्ने सम्भावना छ।
बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो अस्तव्यस्त भएको संगठन नै हो । माओवादी नेतृत्वले राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा लिएको छ, अब यसलाई संगठनात्मक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । माओवादी कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरु उल्टिने र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने पहल माओवादी लिनुपर्छ।
प्रचण्डले अगाडि भने, ‘संसद विघटनविरुद्ध माओवादी केन्द्रले नै लडेको हो। गठबन्धन निर्माण गरेर केपी ओलीलाई घोडाबाट झार्ने काम माओवादी केन्द्रले नै गरेको हो भन्ने जनताले बुझेका छन्। विरोधीहरु र विश्वले पनि बुझेको छ। अब यो पहललाई संगठनमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ।
यसबीचमा नेतृत्वबाट कमी कमजोरीहरू पनि भएको बताउँदै प्रचण्डले संघ र प्रदेश दुबैतिर माओवादी बलियो भएको बताए। उनले भने, ‘यसबीचमा हाम्रा कमी कमजोरी पनि भए। सहिद परिवार, घाइते. र पीडितहरुलाई प्रतिक्रियावादीहरुले हाम्रो विरुद्ध प्रयोग गर्न पनि खोजे। तर, घेरा तोड्दै हामी राजनीतिको केन्द्रमा रहन सफल भएका छौं। संघमा पनि राम्रै स्थितिमा छौं, तीनवटा प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्यो।’
तर, बलियो भएका छौं भनेर ढुक्क भएर नबस्न प्रचण्डले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। उनले बैठकमा भने,‘बलियो छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने तत्वहरुले गठबन्धन तोड्ने र पुरानै सरकार ल्याउन खोजेका छन्। हाम्रो काँधमा अहिले पनि जिम्मेवारी छ । प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने र प्रतिगमनलाई रोक्ने भूमिकालाई अलिकति पनि घट्न दिनुहुँदैन ।
प्रचण्डले अगाडि भने, ‘प्रतिगमनलाई रोक्ने यात्रा अघि बढाउनुछ । अभियान लिएर संगठन र जनमत निर्माण गर्ने काम गर्न जरुरी छ । उनलेअरु दलहरुभन्दा माओवादी पार्टीमा कम समस्या रहेको र वैचारिक रुपमा एकतावद्ध रहेको दाबीसमेत गरे। ‘हाम्रो पार्टीमा निर्णय गरिसकेपछि नमान्ने भन्ने छैन, हिजो गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा पनि कुरा चल्यो, बाहिरबाट हेर्दा सबैभन्दा मिलेको पार्टी माओवादी नै हो’ प्रचण्डले भने, ‘तर मेरो मर्म मैलाई थाहा छ।
तथापि पार्टीभित्र समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लगायत वैचारिक राजनीतिक विषयमा कुनै मतभेद नरहेको प्रचण्डले बताए। ‘यसमा एकरुपता नै छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा सजिलो माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने हिजो गठबन्धनको बैठकमा पनि कुरा भयो।
‘केपी ओली प्रतिक्रियावादका प्रतीक’
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको तीन वर्षे कार्यकालको पनि समीक्षा गरे। नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये केपी ओलीले प्रतिक्रियावादी धारको नेतृत्व गरेको र आफूले क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै ओलीविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गरेको प्रचण्डले सुनाए।
‘हामीले अलि ठूलो सपना देख्यौँ। वाम एकता गर्ने, देशको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले लिने, समाजवादको आधार तयार पार्ने सपना हामीले देख्यौँ र पहल पनि गर्यौं,’ प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने,‘बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा अब केही हुन्छ र हाम्रो दिन फिर्छ भनेर जनताले आशा पनि गरेका थिए । उत्साहको वातावरण बनेको थियो। तर, पार्टीभित्र प्रतिक्रियावादको प्रवेश भयो र त्यो केपी ओली प्रवृत्तिले परिचित भयो । … गएको तीन वर्षलाई मानिसहरुले बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेका छन्। यो प्रयोगको अनुसन्धान हुनेवाला छ।